နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲက သရဲ – PoPinVdo
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲက သရဲ
March 8, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲက သရဲ
ကျနော့်အကိုက ကျောင်းမပြီးခင် ကြင်ယာစုံတော့၊ ကျနော့်မိဘ တွေ ဒေါပွပြီး အမွေဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်၊ အဲဒါနဲ့ မောင်မင်းကြီးသား ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ သူ့ယောက္ခမတွေနဲ့အတူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပိတ် ချိန်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ပြေးတဲ့ “ဈေးသင်္ဘော”နဲ့ ကုန်လိုက် ကူးပါတယ်။ အောက်ပြည်အောက်ရွာ ဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းထွက်တဲ့ ငပိ၊ ငါးခြောက် တွေကို အထက်ဆီ သယ်၊ မြန်မာပြည် အပေါ်ပိုင်းကထွက်တဲ့ သနပ်ခါးတို့ ပဲမျိုးစုံတို့၊ အညာထွက်တွေ စတာတွေကို အောက်ဖက် ပြန်သယ်ပါတယ်။
ဈေးသင်္ဘောပေါ်မှာ ဈေးသည်တွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အပြင် ဖဲဝိုင်းတွေ၊ အရက်ရောင်းတဲ့ အရက်ဆိုင်တွေပါ ပေါ်လာပါတယ်၊ တနေ့ကြတော့ မြစ်လယ်ခေါင်ကနေ လူသေအလောင်း နှစ်လောင်း မျောလာပြီး သင်္ဘော နံဘေးမှာ ငြိပြီး လာကပ်ပါတော့တယ်၊ ဒါ ဘယ်က အလောင်းမှန်းလည်း မသိ၊ အမှုလာပတ်မှာ ကြောက်တဲ့ သင်္ဘောအမှုထမ်းတွေက အဲဒီ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နဲ့ သေဆုံးထားပုံရတဲ့ အလောင်း နှစ်လောင်းကို ၀ါးလုံးတွေ၊ သစ်ချောင်း တွေနဲ့ တွန်းထိုးကြပါတယ်၊ နီးစပ်ရာ ဆိပ်ကမ်း ကပ်ပြီး ရဲစခန်းတွေ ဘာတွေ သွားအကြောင်းကြားရင် အမှုတွေပတ်၊ သက်သေခံတွေ ဘာတွေ လုပ်ပေးရ မှာ ကြောက်တော့ ပိုင်ရှင်မဲ့ လူသေအလောင်းကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း တွန်းထိုး ကြတာပါ။
ဧရာဝတီမြစ်တလျှောက် မြို့အများစုမှာ ဒီလို လူသေ အလောင်း ရေထဲ မျောပြီး ကိုယ့်မြို့က ဆိပ်ကမ်းဆီ လာကပ်လေ့ရှိပါတယ်၊ ဒီလို လာကပ် ရင် အဲဒီမြို့တွေက ရဲတွေ ဦးဆောင်ပြီး မြစ်ထဲ ပြန်မျောသွားအောင် လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ နောက်မို့ဆို ဘယ်က အလောင်းမှန်း မသိ၊ လက်သည်လည်း မပေါ်၊ စစ်ဆေးဖို့ နေရာ အခက်အခဲ၊ ပစ္စည်းပစ္စယ မပြည်စုံတာကြောင့် ရဲတွေ ကိုယ်တိုင် အဲလို လုပ်နေကြပါ။ သူများ တိုင်းပြည်တွေမှာ အနုပညာဆန်ဆန် ရေထဲ ပန်းတွေ မျောကြပါတယ်၊ ဒို့ပြည်တော့ အဲဒီခေတ်တွေတုန်းက နာရေး အသင်းတွေ မရှိလို့၊ အမှုပတ်မှာ ကြောက်လို့ အဲဒီလိုပဲ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို အားကိုးပြီး ရေထဲ မျောကြပါတယ်။
အဲလို သင်္ဘောမှာ လာငြိနေတဲ့ လူသေအလောင်း နှစ်လောင်းကို တွန်းထိုး လိုက်တဲ့ နေ့ကစပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာ အမှုပေါင်းစုံ ပြဿနာပေါင်းစုံ သိသိ သာသာ စ’ပါတော့တယ်။ ပထမတော့ သိပ် မသိမသာပါ၊ သင်္ဘောပေါ်ကနေ ရေထဲ လူ ပြုတ်ကျတယ်၊ ဟိုလူ နေမကောင်း ဖြစ်လိုက်၊ ဒီလူ နေမကောင်း ဖြစ်လိုက်ပါ၊ နောက်တော့ ဒီထက် ကြမ်းလာပါတယ်၊ သင်္ဘောတစ်စီးလုံး ရေလယ်ခေါင်မှာ ညဖက်ကြီး စက်ထိုး ရပ်သွားပါတယ်၊ သင်္ဘောပေါ်က ကုန်ပစ္စည်းတွေ သူ့အလိုလို ရွေ့ပါတယ်၊ ဖြေးဖြေးချင်း သူ့အလိုလို ရွေ့တာကနေ ပုဏ္ဍာက တိုက်သလို ၀ုန်းဒိုင်းကြဲ လာပါတယ်၊ တချို့ဆို တစုံတယောက်က ဇွတ်အတင်း ဆွဲပြီး ရေထဲ တွန်းချတဲ့ ပုံစံမျိုး ကိုးရို့ကားယား နဲ့ ရေထဲ တွန်းချ ခံရပါတယ်။
ရေထဲ ကျသွားသူဟာ သူ့ဘာသာ ကိုးရို့ကားယား ဖြစ်ပြီး ကျသွားတာပါ၊ သူ့နံဘေးမှာ ဘာမှ မမြင်ရပါဘူး၊ သူ့ပါးစပ်ကတော့ ကျနော့်ကို ဆွဲချနေပြီ … လုပ်ကြပါအုံး … ကယ်ကြပါအုံး … စသဖြင့်တော့ အော်ပါတယ်၊ သူ့နံဘေးမှာ ဘာမှ မမြင်ရပါဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ သင်္ဘောတစ်စီးလုံး မြစ်လယ်ခေါင်မှာ ဗျောင်ဆန်နေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ တချို့လည်း ကယ်ပါ … ယူပါ အော်ကြတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ဖြတ်သွား တဲ့ ငါးဖမ်းလှေတစ်စီးက ကမ်းဆီ အမြန်ပြေးသွားပြီး ဘုန်တော်ကြီးတစ်ပါးကို ပင့်လာပါတယ်။
ဘုန်းကြီး ကြွလာတော့ နည်းနည်းလောက် သက်သာလာပါ တယ်၊ လုံးလုံး မပြီးသေးပါ၊ ဒါနဲ့ ဆရာတော်က မေတ္တာသုတ်တွေ ဘာတွေ ရွတ်ဖတ်လိုက်တော့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ၀င်ပူးပြပါတော့တယ်၊ ပြဿနာက လူသေအလောင်း နှစ်လောင်း သင်္ဘောဆီ ကပ်လာတုန်းက သင်္ဘောကလူတွေ ပြန်တွန်းထုတ်လိုက်တော့ လူသေအလောင်းကနေ လက်တစ်ဖတ် ပြတ်ပြီး သင်္ဘောမှာ ငြိပြီး ကျန်ခဲ့တယ်လို့ အပူးခံရသူက ပြောပါတယ်၊ အဲဒီလက်ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ရေထဲ မျောပေးရင် ခြောက်လန့် ဒုက္ခပေးတာတွေ ရပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါနဲ့ လူသေကောင်ရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ညကြီးမိုးချုပ် လိုက်ရှာ တော့ သင်္ဘောနံဘေးအောက်မှာ ပြုတ်ထွက်ပြီး ချိတ်ကျန်ရစ်နေတာကို ထူးထူးဆန်းဆန်း တွေ့ရပါတယ်၊ အဲဒီလူသေလက်ကို ဖြုတ်ပြီး ရေထဲ မျောလိုက်မှပဲ သင်္ဘောလည်း နဂိုအတိုင်း အရာရာ ပြန်ပြီး အဆင်ပြေသွား ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးက ဒီလောက်ပါပဲ၊ အဲဒီသရဲ အခုထိ ရှိရော ရှိနေသေးလား မပြောတတ်ပါဘူး၊ မြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာကြီး ဆောက်ဖြစ်လို့ ဧရာဝတီမြစ် ကြီးထဲ ရေမစီးတော့တဲ့ တစ်နေ့ကြရင် အဲလို သရဲတစ္ဆေတွေ ကုန်းပေါ်တက် လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်နဲ့ လုပ်ကြမလဲ ..??
Credit from >>> ပျူနိုင်ငံ
“နာမညျကွီးနတေဲ့ ဧရာဝတီမွဈထဲက သရဲ”
ကနြေျာ့အကိုက ကြောငျးမပွီးခငျ ကွငျယာစုံတော့၊ ကနြေျာ့မိဘ တှေ ဒေါပှပွီး အမှဖွေတျလိုကျပါတော့တယျ၊ အဲဒါနဲ့ မောငျမငျးကွီးသား ဘာလုပျသလဲဆိုတော့ သူ့ယောက်ခမတှနေဲ့အတူ တက်ကသိုလျကြောငျးပိတျ ခြိနျမှာ ဧရာဝတီမွဈထဲ ပွေးတဲ့ “စြေးသင်ျဘော”နဲ့ ကုနျလိုကျ ကူးပါတယျ။ အောကျပွညျအောကျရှာ ဖွဈတဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးထှကျတဲ့ ငပိ၊ ငါးခွောကျ တှကေို အထကျဆီ သယျ၊ မွနျမာပွညျ အပျေါပိုငျးကထှကျတဲ့ သနပျခါးတို့ ပဲမြိုးစုံတို့၊ အညာထှကျတှေ စတာတှကေို အောကျဖကျ ပွနျသယျပါတယျ။
စြေးသင်ျဘောပျေါမှာ စြေးသညျတှေ၊ ကုနျပစ်စညျးတှေ အပွငျ ဖဲဝိုငျးတှေ၊ အရကျရောငျးတဲ့ အရကျဆိုငျတှပေါ ပျေါလာပါတယျ၊ တနကွေ့တော့ မွဈလယျခေါငျကနေ လူသအေလောငျး နှဈလောငျး မြောလာပွီး သင်ျဘော နံဘေးမှာ ငွိပွီး လာကပျပါတော့တယျ၊ ဒါ ဘယျက အလောငျးမှနျးလညျး မသိ၊ အမှုလာပတျမှာ ကွောကျတဲ့ သင်ျဘောအမှုထမျးတှကေ အဲဒီ ငယျငယျရှယျရှယျ နဲ့ သဆေုံးထားပုံရတဲ့ အလောငျး နှဈလောငျးကို ၀ါးလုံးတှေ၊ သဈခြောငျး တှနေဲ့ တှနျးထိုးကွပါတယျ၊ နီးစပျရာ ဆိပျကမျး ကပျပွီး ရဲစခနျးတှေ ဘာတှေ သှားအကွောငျးကွားရငျ အမှုတှပေတျ၊ သကျသခေံတှေ ဘာတှေ လုပျပေးရ မှာ ကွောကျတော့ ပိုငျရှငျမဲ့ လူသအေလောငျးကို ဖွဈကတတျဆနျး တှနျးထိုး ကွတာပါ။
ဧရာဝတီမွဈတလြှောကျ မွို့အမြားစုမှာ ဒီလို လူသေ အလောငျး ရထေဲ မြောပွီး ကိုယျ့မွို့က ဆိပျကမျးဆီ လာကပျလရှေိ့ပါတယျ၊ ဒီလို လာကပျ ရငျ အဲဒီမွို့တှကေ ရဲတှေ ဦးဆောငျပွီး မွဈထဲ ပွနျမြောသှားအောငျ လုပျလေ့ ရှိပါတယျ။ နောကျမို့ဆို ဘယျက အလောငျးမှနျး မသိ၊ လကျသညျလညျး မပျေါ၊ စဈဆေးဖို့ နရော အခကျအခဲ၊ ပစ်စညျးပစ်စယ မပွညျစုံတာကွောငျ့ ရဲတှေ ကိုယျတိုငျ အဲလို လုပျနကွေပါ။ သူမြား တိုငျးပွညျတှမှော အနုပညာဆနျဆနျ ရထေဲ ပနျးတှေ မြောကွပါတယျ၊ ဒို့ပွညျတော့ အဲဒီခတျေတှတေုနျးက နာရေး အသငျးတှေ မရှိလို့၊ အမှုပတျမှာ ကွောကျလို့ အဲဒီလိုပဲ ဧရာဝတီမွဈကွီးကို အားကိုးပွီး ရထေဲ မြောကွပါတယျ။
အဲလို သင်ျဘောမှာ လာငွိနတေဲ့ လူသအေလောငျး နှဈလောငျးကို တှနျးထိုး လိုကျတဲ့ နကေ့စပွီး သင်ျဘောပျေါမှာ အမှုပေါငျးစုံ ပွဿနာပေါငျးစုံ သိသိ သာသာ စ’ပါတော့တယျ။ ပထမတော့ သိပျ မသိမသာပါ၊ သင်ျဘောပျေါကနေ ရထေဲ လူ ပွုတျကတြယျ၊ ဟိုလူ နမေကောငျး ဖွဈလိုကျ၊ ဒီလူ နမေကောငျး ဖွဈလိုကျပါ၊ နောကျတော့ ဒီထကျ ကွမျးလာပါတယျ၊ သင်ျဘောတဈစီးလုံး ရလေယျခေါငျမှာ ညဖကျကွီး စကျထိုး ရပျသှားပါတယျ၊ သင်ျဘောပျေါက ကုနျပစ်စညျးတှေ သူ့အလိုလို ရှပေ့ါတယျ၊ ဖွေးဖွေးခငျြး သူ့အလိုလို ရှတေ့ာကနေ ပုဏ်ဍာက တိုကျသလို ဝုနျးဒိုငျးကွဲ လာပါတယျ၊ တခြို့ဆို တစုံတယောကျက ဇှတျအတငျး ဆှဲပွီး ရထေဲ တှနျးခတြဲ့ ပုံစံမြိုး ကိုးရို့ကားယား နဲ့ ရထေဲ တှနျးခြ ခံရပါတယျ။
ရထေဲ ကသြှားသူဟာ သူ့ဘာသာ ကိုးရို့ကားယား ဖွဈပွီး ကသြှားတာပါ၊ သူ့နံဘေးမှာ ဘာမှ မမွငျရပါဘူး၊ သူ့ပါးစပျကတော့ ကနြေျာ့ကို ဆှဲခနြပွေီ … လုပျကွပါအုံး … ကယျကွပါအုံး … စသဖွငျ့တော့ အျောပါတယျ၊ သူ့နံဘေးမှာ ဘာမှ မမွငျရပါဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ သင်ျဘောတဈစီးလုံး မွဈလယျခေါငျမှာ ဗြောငျဆနျနပေါတယျ။ အဲဒါနဲ့ တခြို့လညျး ကယျပါ … ယူပါ အျောကွတော့ ခပျလှမျးလှမျး ဖွတျသှား တဲ့ ငါးဖမျးလှတေဈစီးက ကမျးဆီ အမွနျပွေးသှားပွီး ဘုနျတျောကွီးတဈပါးကို ပငျ့လာပါတယျ။
ဘုနျးကွီး ကွှလာတော့ နညျးနညျးလောကျ သကျသာလာပါ တယျ၊ လုံးလုံး မပွီးသေးပါ၊ ဒါနဲ့ ဆရာတျောက မတ်ေတာသုတျတှေ ဘာတှေ ရှတျဖတျလိုကျတော့ အမြိုးသမီးတဈဦးကို ဝငျပူးပွပါတော့တယျ၊ ပွဿနာက လူသအေလောငျး နှဈလောငျး သင်ျဘောဆီ ကပျလာတုနျးက သင်ျဘောကလူတှေ ပွနျတှနျးထုတျလိုကျတော့ လူသအေလောငျးကနေ လကျတဈဖတျ ပွတျပွီး သင်ျဘောမှာ ငွိပွီး ကနျြခဲ့တယျလို့ အပူးခံရသူက ပွောပါတယျ၊ အဲဒီလကျကို ပွနျဖွုတျပွီး ရထေဲ မြောပေးရငျ ခွောကျလနျ့ ဒုက်ခပေးတာတှေ ရပျမယျလို့ ဆိုပါတယျ၊ ဒါနဲ့ လူသကေောငျရဲ့ လကျတဈဖကျကို ညကွီးမိုးခြုပျ လိုကျရှာ တော့ သင်ျဘောနံဘေးအောကျမှာ ပွုတျထှကျပွီး ခြိတျကနျြရဈနတောကို ထူးထူးဆနျးဆနျး တှရေ့ပါတယျ၊ အဲဒီလူသလေကျကို ဖွုတျပွီး ရထေဲ မြောလိုကျမှပဲ သင်ျဘောလညျး နဂိုအတိုငျး အရာရာ ပွနျပွီး အဆငျပွသှေား ပါတယျ။
ဇာတျလမျးလေးက ဒီလောကျပါပဲ၊ အဲဒီသရဲ အခုထိ ရှိရော ရှိနသေေးလား မပွောတတျပါဘူး၊ မွဈဆုံမှာ ရကောတာကွီး ဆောကျဖွဈလို့ ဧရာဝတီမွဈ ကွီးထဲ ရမေစီးတော့တဲ့ တဈနကွေ့ရငျ အဲလို သရဲတစ်ဆတှေေ ကုနျးပျေါတကျ လာမယျဆိုရငျ ဘယျနဲ့ လုပျကွမလဲ ..??
Credit from >>> ပြူနိုငျငံ
စနိုက်ကြော်နေတာမှ မဟုတ်တာ သာသာယာယာပဲ ဆိုပြီး တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး